सफ्टवेयर र ग्राहकहरूलाई जालसाजीहरूबाट रक्षा गर्दै? | Martech Zone
सफ्टवेयर र ग्राहकहरूलाई जालसाजीहरूबाट रक्षा गर्दै?
बुधबार, अक्टोबर 4, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
सायद शायद सबैभन्दा खराब स्पिन जुन मैले कहिल्यै सफ्टवेयर पाइरेसीमा पढेको छु!
लेख पढ्नुहोस्: माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर संरक्षण प्लेटफार्म। यो देशभक्त ऐन जत्तिकै खराब छ! (एकेए: हामीले तपाईको स्वतन्त्रता जोगाउनु पर्छ, र तपाई देशभक्त हुनुहुनेछ यदि तपाईले आफ्ना केही स्वतन्त्रताहरु छोड्नुभयो ताकि हामी तपाईको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकौं…। हुह?)। माइक्रोसफ्टले यसलाई केवल एक आन्तरिक मेमो बनाउनु पर्छ:
माइक्रोसफ्ट लाभ संरक्षण प्लेटफर्म: सफ्टवेयर महंगा राख्दै र छाना मार्फत लाभ!
म दृढ विश्वास गर्छु कि धेरै व्यक्तिहरु मात्र चोर्छन् जब तिनीहरूले गर्नु पर्छ। हो, त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन् जसले यसलाई हेकका लागि चोरी गर्दछन् - तर मलाई लाग्दैन कि यो बहुमत हो। मलाई लाग्छ कि म धेरै व्यक्तिको लागि बोल्दै छु जब म यो सफ्टवेयर सफ्टवेयर भन्छु IS महँगो। साथै, मसँग कहिले पनि कुनै आशा छैन कहिल्यै समर्थन प्राप्त गर्दै। र - मलाई थाहा छ कि सफ्टवेयर चालु राख्नको लागि मैले अद्यावधिकहरूमा निर्भर हुनु पर्छ। र - मलाई थाहा छ कि मैले अन्य सफ्टवेयर किन्नु पर्छ र स्थापना गर्नुपर्नेछ मेरो Microsoft सफ्टवेयरलाई मालिसियस आक्रमणहरूबाट जोगाउन।
शब्द 'जालसाजी' सही शब्द होईन। सफ्टवेयर नक्कली छैन ... बक्सहरू र CD हरू हुन सक्छ ... तर सफ्टवेयर वास्तविक माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर हो। अवैध रूपमा प्रतिलिपि गरिएको र स्थापित सफ्टवेयरसँग लड्ने काम गर्दछ नहीं सफ्टवेयरको सुरक्षा गर्दछ न त यसले ग्राहकहरुलाई सुरक्षा दिन्छ। तपाईंको उत्पादनलाई मन पराउने ग्राहकहरू सँधै यस उत्पादनको लागि भुक्तान गर्न इच्छुक हुन्छन्। (मैले XP र Office XP को लागि भुक्तान गरें)
त्यो अविश्वसनीय रूपमा अज्ञानी र माइक्रोसफ्ट को लागी एक क्रप नोट बाहिर राख्न स्पिन हो। त्यहाँ त्यस्तो कोही छ जो यो विश्वास गर्छन् कि यो इमानदार सन्देश हो? आज मार्केटिंगको साथ समस्या छ, मानिसहरूले विश्वास गर्दैनन् किनभने यो अविश्वसनीय हो।
वाल-मार्ट सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट असफल। सबै भन्दा राम्रो मजाक को $ 50!
अक्टूबर २०, २०१ at २:4० अपराह्न
"Iâ ?? एक दृढ विश्वास छ कि धेरै मानिसहरु चोर्नु पर्छ जब तिनीहरूले गर्नु पर्छ।"
म sooooo तपाईंलाई विश्वास गर्न चाहन्छु। म यति धेरै विश्वास गर्न चाहन्छु कि रोटीका रोटीहरू जुन चोरिन्छन् केवल चोरको भोकाएको परिवारलाई खुवाउँछन्। म यति धेरै चाहिन्छ कि यो सत्य हो ...
तर, यस दिन र उमेरमा म विश्वास गर्छु कि सफ्टवेयर, कसैको सफ्टवेयर, माइक्रोसफ्टको विन्डोज of.समान के शुरुआती वर्षहरूको धुम्रपान-गिलास चश्माबाट देखियो… यसको प्रतिलिपि सही थिएन (!!!) बरु त्यो माइक्रोसफ्टले गरेन 'प्रतिलिपि "दिमागमा लाग्दैन"। (पूर्ण सत्य होइन तर त्यो धारणा थियो।)
मलाई विश्वास छैन कि जो औसतले ​​चयन प्रोग्रामरहरूको कडा मेहनतको बीच स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सक्षम छ, एक जीविकोपार्जनको लागि प्रयास गर्दै, र मेगा-व्यवसाय-मोनोलिथहरू जो केवल तिनीहरूको उत्पादनको लागि उचित मूल्य निर्धारण गर्न कोशिस गर्दैछन्। त्यस्तै जोको पक्षमा थोरै चिन्ता छ कि कुन सफ्टवेयरमा उनले "प्रयोग" गर्छ जुन कहिले कानूनी वा अवैध फेसनमा।
यो धारणा को कुरा हो र त्यो मा एक त्रुटिपूर्ण। हामीले प्रयोग गर्ने प्रत्येक प्रोग्रामको लागि हामीले पैसा तिर्नु पर्छ। मँ विश्वास गर्दछु कि जो औसतले ​​समान धारणा राख्दछ।
माफ गर्नुहोस् ... केवल मेरो $ ०.०२
कुनै माफी माफी आवश्यक छैन, विलियम! मलाई लाग्छ हामी सम्झौताको नजिक छौं तपाईले सोचे जस्तो भन्दा धेरै।
मलाई लाग्छ बहस छलफलको लागि योग्य छ। के पाइरेसीले सफ्टवेयर सफ्टवेयर वितरण गरी सफ्टवेयर कम्पनीलाई मद्दत गर्दछ? म निश्चित छु यसले केहिको लागि गर्छ।
सायद म भोली छु मान्छेहरु भुक्तान गर्नेछ सोच किनभने म सफ्टवेयर को लागी भुक्तान गर्छु। मैले स्वीकार गर्नै पर्छ कि मैले पाइरेटेड सफ्टवेयर प्रयोग गरें र त्यसको लागि पछि भुक्तान पनि गरें। कहिलेकाँही ट्रायल एकदम सीमित हुन्छ र मलाई अझै पक्का विश्वास थिएन कि यो पैसाको लायक छ कि छैन।
मेरो ह्रदयको हृदयमा म विश्वास गर्दछु कि आपूर्ति र माग नियन्त्रण मूल्य। छाँटकाँट गरेर र यसलाई रोक्दै कि नियन्त्रणको साथ एक व्यक्ति लाई किन्न बाध्यता, मेरो विचारमा तपाईले मानिसहरूलाई यसको सट्टामा चोरी गर्न भनिरहेको छ।
विन्डोजको मूल्य कति छ? $ 400? $ १००? $ १० / मो? नयाँ कम्प्युटरमा (OEM) अपग्रेड गरिएको कम्प्युटरको भन्दा यो किन धेरै पैसाको मूल्य हो? मलाई लाग्छ कि मूल्य निर्धारण संरचना स्वाभाविक रूपमा त्रुटिपूर्ण छ, र माइक्रोसफ्टले पाईरासीमा उनीहरूको सफ्टवेयरलाई बढी किफायती बनाउनुको सट्टा धेरै पैसा खर्च गर्दछ।
टिप्पणीका लागि धन्यबाद!
मैले आशा लिएको थिए कि अरूहरू पनि यहाँ मैदानमा सामेल हुने छन् ... तर काश ... मैले केहि लम्बाइको प्रतिक्रिया तयार गरेको छु र त्यस्तै पोस्ट गरेको छु। डग कारलाई जवाफमा ...